Muva nje, lapho izindaba zilukhuni ukulandela, kunezinto ongeke uzigcine nje. Njengoba singathandi ukuhlala ngendlela evamile, futhi sisebenzisa izinto zakudala, kudingeka sizilungiselele ezweni elizungezile futhi sithathe izinto zokugcina kulo futhi sisebenzise izinto ezintsha. Kuze kube maduzane, eminyakeni engaba ngu-100 engaqondakali esedlule, umuntu akazange azibonele ukuthuthukiswa okusheshayo okusheshayo, kodwa namuhla lokhu akukwazi ukunakwa.
Isibonelo, enye yezinto zokwakha eziwusizo iyithekithi ye-elekthronikhi yezindiza. Lokhu akuyona nje into engabonakali, kodwa impumelelo yangempela yesimanje. Esikhathini esizayo esiseduze, i-e-tikithi yaqala ukuhlala kwayo, futhi namuhla ithatha indawo ithikithi lomoya lephephandaba. Izivakashi eziningi zifuna, njengangaphambili, ukusebenzisa amahhovisi amathikithi e-air ukuthenga amathikithi.
Isizathu esilula umkhuba womuntu. Olunye ukwesaba kungaba yisizathu sokuthi kungase kube khona ukungathembeki ... njll ... Nokho, lezi zizathu akuyona into ngaphandle kokungazi. Bambalwa abantu abafuna ukufunda ubuchwepheshe bamuva, amasevisi amasha amasha, njll. Ngakho-ke, abantu abanjalo bangalahlekelwa, ngoba ngubani olala ngemuva kwesikhathi, maduze uzolahlekelwa.
Sikukwazisa ukuthi unqume ukuthi leli yiyitikithi ye-elekthronikhi yezindiza. Futhi futhi sizohamba ngendlela emfushane ekusesheni amathikithi e-air ekuthengeni kwawo. Kuwebhusayithi i-aerola.ru - amathikithi e-airline eshibhile, insizakalo elula yokusesha amathikithi ezindiza ezindiza ezenziwe eshibhile. Isevisi ethunyelwe ayiyona inkimbinkimbi futhi ayidingi amakhono akhethekile avela kumvakashi. Nokho, kunemibuzo, futhi ukwenza konke kucace, sizoyithola impendulo kubo. Ake sithi sibheke indiza yaseSamara-Krasnodar, okokuqala udinga ukungenisa ulwazi oludingekayo etafuleni, elisemhlokweni wesayithi. Ngemva kwalokho, ngemuva kokuchofoza sekuphelile, hamba emiphumeleni yokusesha. Lapha sizobona idatha ye-ejensi kusiqondiso esiyidingayo. Njengoba ubona, amathikithi omoya azolethwa ngezindleko. Ishibhile sinikezwa kuqala, futhi esabiza kakhulu ekugcineni kombiko. Futhi manje, yini okuzodingeka, ukhethe isiphakamiso esiyithandayo.
Okulandelayo, siya esiteshini sezindiza esithakazelisayo kithi, senze ukuhamba emoyeni okudingekile kithi. Kuwebhusayithi yezinkampani eyenziwe ngokucacile kakhulu kumsebenzisi. Ngakho-ke, kufanele nje ulandele imiyalelo, bese kulula ukuqala inqubo yokubhuka nokuthenga amathikithi aphansi esiteshini sezindiza. Sinethemba, uzothanda le ndlela yokuhlola nokuthenga amathikithi e-air, njengoba inzuzo, elula futhi elula. Uma ungathengi amathikithi e-air okwamanje, kodwa ucabanga ukuthi uzokwenza kamuva, bese ulondoloza ikheli lewebsite ye-Aerola.ru kumabhukimakhi akho ukuze ukwazi ukukuthola kalula kamuva. Noma kunjalo, sincoma amathikithi okubhuka kusengaphambili (izinyanga ezimbalwa ngaphambi kokuhamba). Iqiniso liwukuthi ukusondeza ekuqaleni, kunokuthi amanani amathikithi aphezulu aphezulu. Ngakho-ke, ukuthola amathikithi e-air ticket eshibhile, sikukwazisa ukuba usheshe. Cishe namuhla kunesikhathi esiningi sokuthenga amathikithi nokuzola, ngoba isihlalo sakho endizeni ngeke sisabanjwa ngosuku olufunayo lokuhamba.
Jabulela uhambo lwakho nempilo enhle!
Ringed ufudu ijuba: lapho izimpilo kanye ifana le nyoni